Ukuhlamba, Ukuthambisa, Ukuqina | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Udidi: Ubhedu, Ukuhlambalaza, UkuPhepha
Ziziphi iiklasi zeFLEX Ukubetha? Yintoni echaphazelayo kunye negalelo?
Zithini iiklasi zokolula i-FLEX? Zinefuthe lini kwaye zinegalelo lini kuzo? ewe ... Okwangoku kuseto lobuchwephesha ukusuka kwiminyaka eli-7 ubudala, ngelixa iigaments zisolula! kwaye apha, "njani ...
Ngaba ndiyakweba iesile?
Ngaba kunokwenzeka ukuba upompe iesile kunye ne squats? Awunakho ukumpompa ngesikwere. Izikwere zijija amathanga. UGalina, amehlo kunye nengqondo yenkuku kwaye ingeyiyo loo nto ngoku inikwe ngesihloko: pompozela iesile lakho KUPHELA nge squats kwaye unako! ...
Ukukhutshwa kwediski ye-intervertebral kunye noxinzelelo lwengxowankulu emzimbeni!
Ukukhutshwa kwediski ye-intervertebral kunye noxinzelelo lwengxowa yangaphakathi! ukuqhubela phambili-ukuqala kwe-hernia)) kwaye kubonakala ngathi le luvo luyachaphazeleka)) iintlungu eziqatha zokudumba zinokwenzeka)) iingcebiso (ukuba kukho ukuqhubela phambili kwi-thoracic okanye lumbar vertebra) ukuxhoma ...
Yintoni eyenziwa yi-aerobics? Yintoni i-aerobics?
Wenza ntoni kwi-aerobics? Yintoni iAerobics? I-Aero # 769; i-bika (eyaziwa ngokuba yi-gymnastics yesigqi) i-gymnastics kunye nomculo onesigqi esinceda ukulandela isigqi sokuzivocavoca. Iseti yokuzivocavoca ibandakanya ...
I-lymphatic drainage massage - yintoni le nto?
I-lymphatic drainage massage - yintoni le nto? Into efana nokushukuma kwe-massage ye-massage ye-lymphatic drainage iyenziwa ukuze kupheliswe ukungahlali kolwelo kwizicubu, ukukhawulezisa ukuhamba kwe-lymph, ukuphucula imetabolism yethishu kunye nesondlo, ukususa ngokukuko ityhefu. Eyona ...
Zingaphi i-massage ye-massage rate yeeyunithi zabantu ngosuku lomsebenzi? Yintoni eqhelekileyo ngokwemiqathango yabasebenzi?
Zingaphi iiyunithi anazo masseur ngemini yokusebenza? yintoni inkcubeko phantsi kwekhowudi yabasebenzi? Abantu abangama-15 ukuya kuma-20 abangama-36 KWAM ngokuhlala iintsuku ezintlanu kunye neeyure ezisi-5 zomsebenzi. phantsi kweKhowudi yomSebenzi ...
umva wam ubuhlungu. Umqolo wam ubuhlungu emva kokuhlala ixesha elide kwisihlalo ukunceda ukuphilisa
Umqolo wam ubuhlungu. Umqolo wam ubuhlungu emva kokuhlala esihlalweni ixesha elide, ndincede ndiphinde ndizame ukuhlala emva kwesihlalo, kodwa esitulweni. Unendawo elungileyo ndinike imeyile yakho !! ! ...
Ukuya kwi-sauna ngokokuqala ngqa. Yintoni onokuyenza kunye nawe?
Ndiya kwisuna okokuqala ngqa. Yintoni oza kuhamba nayo? iintombi .. Abahlobo beer kunye nomfana akukho nto! itawuli ebanzi, ikepusi yeenwele, ityuwa yokuthambisa emzimbeni, ukurabha ngaphakathi, emva kokuhlanjwa kunye ...
Ziziphi iidyxin? Kwaye kutheni ubonise?
Zithini iityhefu? Kwaye kutheni uzikhupha? Kwaye andiyifundi i-avatar kaValeria. Izifundo zibonise ukuba malunga ne-98% yabo bonke abaswelekileyo kwihlabathi liphela babangelwa zizifo ezahlukeneyo. ...
Yenzakalisa kakhulu imisipha yemilenze emva kokugqithisa. Yintoni oyenzayo
Imisipha yemilenze ibuhlungu kakhulu emva kokugcwala kakhulu. Kwenziwe ntoni? Zama i-aqua, emva kokuba kungekho zihlunu zenzakeleyo.Bazakudlula ngokwabo! awunakunceda nangayiphi na indlela xa bekwenzakalisa ewe emva kokuzilolonga. Ukuphulula,…
Kuphi ukuhlamba? EMoscow
Uzohlamba phi? Iibhafu zaseMoscow Kuntsevskie - iiruble ezingama-350 ixesha elingenamda Kukho iindlela ezininzi: 1. Thenga ukuhamba-ngesifudumezi samanzi. Kunyaka olandelayo baya kuyicima kwakhona, ke ngokuqinisekileyo iya kulunga. Ixabiso eliphantsi (kakuhle ...
malunga nokusila. Bhala imbongo malunga nokusikwa. Ubuncinane imigca ye-4
malunga nokuthanjiswa. Nceda ubhale umbongo malunga nokuthanjiswa. Ubuncinci imigca emi-4 Masizame ukuba nesiqalo sokuba umntu ocekethekileyo uwugubungela njani umzimba wakho njengengubo Kudala wafuna ukuphumla Kwaye umntu ...
Ngaba ndifuna ukuba nemfundo yezokwelapha ukuba ndisebenze njengengcali yomzimba okanye ndigqibe izifundo?
Ngaba kufuneka ndifumane idigri yezonyango ukuze ndisebenze njenge-massage therapist okanye ngaba ndanele ukugqiba izifundo? ngokuqinisekileyo. nangaphezulu. sukucinga ukuba le ingeniso elula kwaye inkulu. ngumsebenzi onzima nokuziphatha ...
Indlela yokupompa i-latissimus imisipha emva kwamaphiko.
Uyipompa njani i-latissimus dorsi, amaphiko .. eminye yemithambo: 1. tsala ngentambo ebanzi, ngomqolo wentloko ebharini 2. umi, tsala ibha uye esiswini 3. umva uhambelane nomgangatho, inyawo elinye emgangathweni ...
Yintoni oyifunayo ukuba uhambe nawe kwindawo yokuhlambela?
Yintoni ekufuneka uhambe nayo kwi-sauna? Umlindi, uzakuthatha okuseleyo! Ke, siya kwigumbi lokuhlambela. Yintoni ekufuneka uhambe nayo kwindawo yokuhlambela ngaphandle kwelinen ecocekileyo? Ke sidwelise: ...
Indlela yokusebenzisa izitya ze-bamboo kwindawo yokuhlamba? Ngaba kufuneka uqhube?
Ungazisebenzisa njani izinti zoqalo kwisunauna ?? Ngaba kufuneka zitshiswe? Andazi malunga nemitshayelo yoqalo. Izinti zisetyenziswa njengemassager. Kulula ukuyisebenzisa njengentonga. Kuphela oku kwenziwa hayi kwigumbi elinomphunga, kodwa emva ...
Indlela yokuqhawula umhlane wakho, ngaphandle koluncedo lomntu, ngokwakho?
Ungazikrweca kanjani umqolo ngokwakho, ngaphandle koncedo lomntu, ngokwakho? Ukuzinyanga yinto enzima kodwa enobuchule yokuzenzakalisa! Ngamanye amaxesha kuyanceda ukulala phantsi, ukutsala amadolo esifubeni, ukusonga iingalo zakho kwimilenze yakho. Qengqela ngaphaya ...
yintoni i-hamam yokuhlamba?
yintoni ibham ham? Ibhafu yaseTurkey ene-kischa (LAPHO kuxa umqolo uhlikihliwe ngendwangu yokuhlamba ekhethekileyo, isusa ukungcola) BesiseTurkey saya kwindawo yokuhlambela enjalo. Eli ligumbi elinombhoxo ...
Liliphi igama elichanekileyo le-cardio simulator skis?
Liliphi igama elichanekileyo leskim simulator? Abaqeqeshi beCardio zizinto ezilinganisa iintshukumo zendalo zomntu: ukubaleka, ukuskiya, ukunyuka izitepsi, ukubheqa, ukukhwela ibhayisikile. Ngokuhambelana noku, bayahlula ...
Ukuqhuba ibhayisekile yinto enye ngaphandle komshicileli?
Ngaba ikho enye into oyifunayo ngaphandle kwebhayisekile? lo ngumsebenzi oluncedo kakhulu kumalungu amadolo kunye nemisipha ... imilenze yenye yezona zibaluleke kakhulu!) izihlunu kwimilenze iyampompa Ukomeleza ...
Imibuzo ye-81 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,904.